सिल्लल: प्रसिद्ध अनस्कपयोग्य वेबसाइटहरू
तपाईंले मैन्युअल रूपले चाहानु भएको डाटा स्क्रैप गर्न, तपाईलाई उत्कृष्ट प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू आवश्यक छ. वैकल्पिक रूपमा, तपाईं वेब डेटा निष्कर्षण उपकरण को एक दायरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन पढ्न को लागी, संरचना र एक निश्चित ढाँचा मा डाटा स्क्रैप गर्न को लागी. तथापि, केहि वेबसाइटहरू अनस्कपयोग्य छन्, जसको अर्थ तिनीहरूले विरोधी स्क्रैपिंग प्रविधि प्रयोग गर्दछन् वा नियमित रूपमा आफ्नो मार्कअप परिवर्तन गर्दछन्. उदाहरणको लागि, लिङ्क गरिएको, अलिबाबा र फेसबुक लगइन विवरणहरू चाहिन्छ, क्याप्चा प्रविष्ट गर्न प्रस्ताव गर्नुहोस्, र उनीहरूको प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न IP ठेगानाहरू ब्लक गर्नुहोस्।.
फेसबुक फेसबुकको सबैभन्दा लोकप्रिय सोशल सञ्जाल वेबसाइट हो जुन दुनियाभरि 20 लाख भन्दा अधिक सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्।. त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू र डेटा स्क्रैपिंग प्रोग्रामहरू छन् जुन फेसबुकबाट व्यक्तिगत जानकारी निकाल्ने उद्देश्य हो. दुर्भाग्यवश, धेरै उपकरणहरूले हामीलाई सही र पढ्न योग्य डेटा प्रदान गर्दैनन्. फेसबुकले यसलाई (1 9) स्प्यानर र हैकरहरूको प्रयोगकर्ताको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न गाह्रो बनाएको छ. यो केवल HTML पार्सर जस्तै Python को मदद संग प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर वेबमास्टरहरु र फ्रीलान्सर को अधिकांश भन्दा पनि पाइजोन को मूल कुराहरु लाई थाहा छैन. भर्खरै, फेसबुक स्क्रैपर यस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटबाट महत्त्वपूर्ण जानकारी निकाल्नको लागी सुरु भयो. एक फेसबुक स्क्रैर संग, तपाईं फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु को नाम र इमेल ठेगानाहरु लाई मात्र जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ. तर यदि तपाईं गहिरो डेटा सङ्कलन गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यस उपकरण वा अन्य यस्तै उस्तै स्क्रेपर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न.
2. लिङ्क गरिएकोइन:
लिंक गरिएकोइन अर्को सामाजिक सञ्जाल वेबसाइट हो जुन स्क्रैप गर्न असम्भव छ।. यद्यपि, तपाईं आंशिक रूपमा केहि वेब पृष्ठबाट डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर अधिकांश जानकारी पहुँचयोग्य छैन. तपाईं आयात गरेर लिङ्क गरिएको सार्वजनिक प्रोफाईलबाट मात्र जानकारी स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ. आईओ या किमोनो ल्याब्स. लिङ्कडाइको बलियो सुरक्षा उपायहरूको कारण मार्केटहरूले स्क्रैपिंग सेवाहरूको फाइदा लिन सक्दैन. यद्यपि, तिनीहरूले लीड एक्स्ट्रेक्टर प्रयोग गरेर सुरू गरेको छ, जसले सार्वजनिक प्रोफाइल स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ. यो उपकरणले केवल प्रोफाईल लिङ्कहरू, नामहरू, र इमेल ठेगानाहरू मात्र स्क्रैप गर्न सक्छ. तर यदि तपाईलाई स्काइप आइडी, याहू मेसेन्जर आइडी, पूर्ण ठेगाना र प्रयोगकर्ताको ट्विटर आईडी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, लिङ्क गरिएकोइले तपाईंलाई त्यसो गर्न दिनेछैन।.
अलिबाबा एक टेक्नोलोजी ईन्जिनियरिङ् हो जुन अनलाइन-अनलाइन उपभोक्ता सेवा प्रदान गर्दछ।. दुर्भाग्यवश, यस वेबसाइटबाट डेटा परिमार्जन गर्न कुनै तरिका छैन. अमेजन र ईबेको विपरीत, अलिबाबाले प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको उत्पादन, छविहरू, विवरणहरू, र मूल्यहरू बारे जानकारी निकाल्न कठिन बनाएको छ।. 2015 मा, केही उपकरणहरू जसले सजिलै संग अलिबाबा बाट डाटा स्क्रैप गर्न सक्थे जनतालाई पेश गरियो. अधिकतर उपकरणहरू भुक्तान गरिएका छन् र स्टार्टअपहरूको अपेक्षाहरू आउँदैनन्. अलिबाबा संसारभरको व्यापक सङ्ग्रह सञ्चालन गर्दछ र आपूर्तिकर्ताहरूसँग खरिदहरू जोड्दछ. यसबाहेक, यसले उनीहरूको गोपनीयतालाई सुनिश्चित गर्दछ र कसैलाई डेटालाई स्क्रैप गर्न अनुमति दिँदैन. अक्टोबर 2017 सम्म, अलिबाबा मासिक प्लेटफर्ममा मासिक सक्रिय 500 मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन्. अलिबाबाले पनि अमेजन, गुगल, र माइक्रोसफ्ट क्लाउड राजस्व वृद्धिमा प्रमुख क्लाउड प्लेयरहरू भन्दा बाहिर निस्क्यो. यसले आपूर्तिकर्ताहरूको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न र सबै संदिग्ध आईपी ठेगानाहरू सेकेण्ड भित्र ब्लक गर्न सर्वोत्तम रणनीतिहरू लागू गरेको छ Source .